Edirnekapi - RayHaber | raillynews
Mashruucyada gaadiidka ayaa kor u kacay sicirka guryaha
Mashaariicda gaadiidku waxay kordhisay qiimaha guryaha: Mashruucyada gaadiid ee ay dhamaan dadka reer Istanbul filayaan farxad aad u weyn ayaa kordhiyay qiimaha gobolada wadada. Dhismaha Buundada Saddexaad ee Bosphorus iyo Eurasia Tunnel, oo la rajaynayo inuu fududeeyo isu socodka magaalada Istanbul, ayaa si buuxda u socda. [More ...]
Duulimaadyadii shilalka gawaarida ee Metrobus ayaa hakad galay: Edirnekapı shil ka dhacay awgeed shilkii socodka gawaarida ayaa hakad galay in muddo ah. Duullimaadyadii u dhexeeyay Istanbul iyo Edirnekapı-Bayrampaşa saldhigyada ayaa la joojiyay shilka metroobus awgiis. Isugeynta taraafikada [More ...]
Shilka Metrobus ee Edirnekapı
Shilka Metrobus ee Edirnekapi: Mega Kent Magaalada Istanbul waxaa ka dhacay shil la yaab leh oo metrobus ah. Warkii ugu xumaa ee maalinta, [More ...]
IETT waxay furaysaa khadad cusub oo isku dhafan Marmaray: 5, oo IETT ay adeegsiisay waxyar ka hor furitaanka Marmaray, waxay furaysaa khadad cusub. Si loo hubiyo dhexgalka Marmaray wadooyinka kale ee gaadiidka dadweynaha, IETT [More ...]
Wareejinta Marmaray ilaa Edirnekapı
Kala wareejinta Marmaray oo loo maro Edirnekapı: IETT waxay dejisay basas kala wareejinta xarunta Kazlıçeşme una tagto boosteejada Marmarnekapı, oo la furay bishii hore oo soo jiidatay dareen weyn. Basasku waxay waafaqsanyihiin lambar MR12 [More ...]
Maqaalka Metrobus wuxuu u guuraa Edirnekapı
Khadka tareenka ee loo yaqaan 'Metrobus Line', oo u adeega celcelis ahaan 750 kun oo rakaab ah maalin walba, ayaa laga maareeyaa taliska IETT iyo xarunta kontaroolada ee Kağıthane. Xaruntan, oo loogu yeero maskaxda metrobus, joogsiga 40 waxaa lagula soconayaa kamaradaha 180. Xitaa dhalaalaha [More ...]